အွန်လိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များစစ်မှန်သောအမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များဝယ်သည်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုခံနေရသည်
ယူအက်စ်အတွက် Vis ည့်သည်ဗီဇာ
Green Card တစ်ခုရယူခြင်း
ကနေဒါအတွက် Vis ည့်သည်ဗီဇာ
ယူအက်စ်ပတ်စ်ပို့ | biometric နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူအက်စ်အေ
Bio-metric မှတ်ပုံတင်ထားသော US, UK, Canada, German Passports Online ကိုဝယ်ပါ
ငါတို့၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်"နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများကိုအမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ယူကေ၊ ဂျာမနီ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက D ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ual နိုင်ငံသားဖြစ်မှု 32 နှစ်ကြာသည်
ယူအက်စ်အေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအွန်လိုင်းမှာယူပါ, အွန်လိုင်းယူကေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်, အွန်လိုင်းကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝယ်
ဒုတိယနိုင်ငံသား / နိုင်ငံသားနှစ်မျိုး:
ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူပြီးနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပါ။ နိုင်ငံသားမျိုးစုံ, နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း, နိုင်ငံသားမျိုးစုံ or နိုင်ငံသားနှစ်မျိုးလူတစ် ဦး ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများအောက်တွင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထက် ပို၍ နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများကသင်၏အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးအာမခံထားသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရွေးချယ်မှုများကိုပေးပါစေ။
ယူအက်စ်အတွက် V ည့်သည်ဗီဇာ
IMMIGRATION နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်းများ
ယူကေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ပါ။ UK အဆင့် ၂ ဗီဇာအစီအစဉ်အရ Tier2စပွန်ဆာပေးသည့်လိုင်စင်ရှိသည့်အလုပ်ရှင်နှင့်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ UK နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုမှာယူပါ.
Tier2စပွန်ဆာလိုင်စင်
Tier 1 လုပ်ငန်းရှင်ဗီဇာ
အမေရိကန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ပါ။ အမေရိကန်မှပြောင်းရွှေ့လာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဗီဇာစနစ်သည် L1, E2, H1B ဗီဇာအစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို ၀ င်ခွင့်ပြုပါသည်။ အွန်လိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်.
E2 စာချုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် E1 စာချုပ်ကုန်သည်ဗီဇာ
L1B အထူးဗဟုသုတဗဟုသုတ ၀ န်ထမ်းနှင့် L-1A အမှုဆောင်နှင့်မန်နေဂျာဗီဇာ
H1B အစား B1
သြစတြေးလျနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်တွင် Skill Select စနစ်အောက်တွင်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။ သြစတြေးလျ၌အမြဲတမ်းနေထိုင်ပါ.
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ Passport Online ကိုဝယ်ပါ၊ ကနေဒါသည်အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်ခွင့်အရထောင်နှင့်ချီသောကျွမ်းကျင်သောပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများကို ၀ င်ခွင့်ပြုသည့်ကျွမ်းကျင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာအစီအစဉ်များရှိသည်။ အွန်လိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ
ကနေဒါကျွမ်းကျင်သော Visa အမျိုးအစားကျွမ်းကျင်မှု
ကနေဒါမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားသလား သင်ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်စစ်မှန်သောကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါသလား။ ကနေဒါတွင်သင့်တွင်အလုပ်တစ်ခုရှိပါသလား သို့မဟုတ်သင်ကုမ္ပဏီအချင်းချင်းလွှဲပြောင်းလျှောက်ထားသူကိုသင့်ကုမ္ပဏီ၏ကနေဒါရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ခံရသလား။ ကနေဒါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ချင်သလား။ ကနေဒါနိုင်ငံသားအလုပ်ဗီဇာသည်သင်တို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသည် ကနေဒါသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုရွန်တိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများကထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည်ကနေဒါတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရန်ကူညီခဲ့ကြသည်။ ငါတို့လိုအပ်လိမ့်မယ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာ သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုဖြည့်စွက်ရန်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်သင်ရရှိနိုင်သောတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည် အမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ် ကနေဒါ status ကို။ အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ လူဝင်မှုဗီဇာ ကနေဒါနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်နဲ့ကနေဒါမှာအမြဲတမ်းပညာသင်ခွင့်ပေးတဲ့စံချိန်တင်ကမ်းတက်မှုလို့ခေါ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများကသင့်အားမည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ ကနေဒါအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာများ။
ကနေဒါနိုင်ငံသား US Work Visas နှင့် US Work Permits များကိုစံချိန်တင်နံပါတ်ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ NAFTA သည်ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပညာရှင်များသည်ယူအက်စ်အေတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းသစ်များကိုရယူနေကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုရွန်တိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူများသည်ယူအက်စ်တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရန်ကူညီသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ငါတို့စစ်ဆေးရန်အားပေးကြသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အွန်လိုင်းသက်တမ်းတိုး ဝန်ဆောင်မှု။
သင်၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင်ကလျှောက်ထားနိုင်သည် ယူအက်စ်အစိမ်းရောင်ကဒ် မိသားစုအခြေပြုအသနားခံစာကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ်သင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူနှင့်လက်ထပ်ပါကသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင့်အားထောက်ပံ့ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အမေရိကန်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အတွက်သင့်အားအသနားခံလိုသောအမေရိကန်အလုပ်ရှင်တစ် ဦး ရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများကသင့်အားမည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ ယူအက်စ်အေအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာများ။
နာမည် * (လိုအပ်သည်)
ဖုန်းနံပါတ် * (လိုအပ်သည်)
သင်၏အီးမေးလ် * (လိုအပ်သည်)
စင်ကြယ်စွာနေထိုင်ခြင်းလား (နိုင်ငံ) * (လိုအပ်သည်)
---အာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားအာတိတ်သမုဒ္ဒရာယူးဘားAshmore နှင့် Cartier ကျွန်းများအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းBaker ကျွန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစအိန္ဒိယ Bassas daဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးBritish Virgin Islandsဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းClipperton ကျွန်းကိုကိုးကျွန်းကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွတ်ကျွန်းစုသန္တာပင်လယ်ကော့စတာရီကာအိုင်ဗရီကို့စ်ခရိုအေးရှားကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့တီမောအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဥရောပကျွန်းဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး)ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်အန္တာတိတ်မြေgabonဂမ်ဘီယာဂါဇာကမ်းမြှောင်Georgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်Glorioso ကျွန်းများဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်Howland ကျွန်းဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်လူသား၏ကျွန်းဣသရလေအီတလီဂျမေကာဇန်နဝါရီ Mayenဂျပန်Jarvis ကျွန်းဂျာစီJohnston Atollယော်ဒန်မြစ်Juan က de Nova ကျွန်းကာဇက်စတန်ကင်ညာKingman ReefကီရီဘာတီKerguelen ကျွန်းစုကိုဆိုဗိုကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယားဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesiaတစ်ဝက်တစ်ပျက်ကျွန်းများမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruNavassa ကျွန်းနီပေါနယ်သာလန်နယ်သာလန်အန်တီနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ကိုရီးယားမြောက်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပါကစ္စတန်ပလောင်းPalmyra atollပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံParacel ကျွန်းများပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ကျွန်းများပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံရိုမေးနီးယားရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုေတာင္ကုိးရီးယားစပိန်Spratly ကျွန်းစုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbardဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုထရုန်းလင်းကျွန်းတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islandsကျွန်းနိုးWallis နှင့် Futuna-အနောက်ဘက်ကမ်းအနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ယူဂိုဆလားဗီးယားဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
နိုင်ငံသား * (လိုအပ်သည်)
ဇြန္လ 22, 2017
Posted by ကို admin ရဲ့
CND အလုပ်၊ လေ့လာရေးနှင့် Vis ည့်သည်ဗီဇာ
တစ် ဦး အကဲဖြတ်ရယူပါ
အကြံပေးချက်မျှဝေပါ | ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ | ငွေကြေးငြင်းဆိုမှု | ခွင | သီးသန့်လုံခြုံရေး | စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: သင်နှင့် uscis နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဗီဇာအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ သို့သော်ရှေ့နေ - ဖောက်သည်အခွင့်ထူးသို့မဟုတ်အလုပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ uscis နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဗီဇာသည်သင်၏သီးခြား ဦး တည်ချက်တွင်လွတ်လပ်သောရှေ့နေများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ရှေ့နေသို့မဟုတ်ဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အစားထိုးမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သောဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများ၊ ကုစားမှုများ၊ ကာကွယ်ရေးများ၊ ရွေးချယ်စရာများ၊ ပုံစံများသို့မဟုတ်နည်းဗျူဟာများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အကြံဥာဏ်၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်၏ ၀ င်ရောက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အကျုံးဝင်သည်။
လူမှုဝေစုခလုတ်များနှင့်အိုင်ကွန်များ Ultimatelysocial အားဖြင့် powered
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောဗဟုသုတရှိသည့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ထမ်းများ။ ရှုပ်ထွေးသောအမှုများကိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ပြီးရလဒ်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲငါ့ကိုဒီလောက်ကြာအောင်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာကိုထောက်ပံ့ရန်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဘို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အဖွဲ့မှရရှိသောကျွန်ုပ်၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူ ၆ ကြိမ်မြောက်ခရီးထွက်ခြင်း၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏စွမ်းအားကိုတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ အဲဒါမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတယ် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ခံရန်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလိမ့်မည်။
Harjeet Singh က Oberoi
ယုံကြည်စိတ်ချရသော & ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီ, မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲနဲ့မယုံနိုင်စရာ။ အများကြီးတန်ဖိုးထား
Jagjit Singh က Gaba
အကောင်းဆုံးနေရာ, ဒါပေမယ့်ငါ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပြောင်းအလဲနဲ့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ပါ
ငါ့ကိုလမ်းညွှန်တွေအများကြီးပေးတဲ့ USCIS Passport Visa အဖွဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၂ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဗီဇာရရှိသောကြောင့်ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်နေပါသည်။ စုစုပေါင်း ၆.၅ လက်မနှင့် ၅.၅ ချည်နှောင်သည်။ ကျောင်းသားများအားလုံးကိုဒီကိုလာပြီးဒီမှာလျှောက်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ငါလျှောက်ထားလိုသောကျောင်းအတွက်ဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်ခုကိုရရှိရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ဘဏ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင်တောင်းခံထားသောငွေပမာဏအတွက်ကြောင့်ဘတ်ဂျက်မရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တရား ၀ င်ကျောင်းတစ်ခုရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့အဖွဲ့ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်။ ငါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်
Manpreet Singh က Lubana
USCIS နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဗီဇာသည်ဗီဇာရရှိရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ သင့်အားပညာရှင်ပီသစွာနှင့်ပညာတတ်စွာဖြင့်သင်ကြားပို့ချပေးသည်။ လူတိုင်းကိုသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရန်အကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဗီဇာကိုတစ်လတွင်အကြီးအကျယ်ထောက်ခံမှုရရှိသည်။
ငါပါကစ္စတန်မှဒေါက်တာ Muhammad Muhammad Tariq ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မော်လတာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအချိန်မီပေးခဲ့သောကြောင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
USCIS Passport ဗီဇာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ရတာကျွန်တော့်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ အသင်းတစ်ဖွဲ့လုံးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလအတွက်စိန့်လောရင့်ကောလိပ်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ဗီဇာရရှိရန်တစ်ပတ်အတွင်းသူတို့အကြံပြုလိုသောအလုပ်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန်ကူညီပေးသောဂျူလီယာစတူးဝပ်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတရားဝင်ကယ်နှုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်တော်သောစကားလုံးများမရှိသော်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများစွာအားကျွန်ုပ်၏တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုအဖြစ်ယူဆောင်လာမည်ဟုကတိပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်